परदेशी श्रीमानका मनका कुरा | Kendrabindu Nepal Online News
परदेशी श्रीमानका मनका कुरा
२ असार २०७५, शनिबार १४:१४
मेरी म्यारी बुढी,
मायाले मात्रै जीवन नचल्ने रहेछ प्रिय त्यसैले त सँगै जिउँने, सँगै मर्ने कसम खाएर पनि हामी अहिले सँगै बस्न पाएका छैनौ । समय र परिस्थितीले मान्छेलाई कहाँबाट कहाँ पु¥याउँदो रहेछ । त्यसैले अहिले हामी टासिएको मनलाई चोइत्याएर अलग बस्न बाध्य छौँ ।
तिमीलाई छोडेर परदेशिनु मेरो रहर होईन कर हो । तिमीलाई थाहै छ । त्यहाँ हामीले जे जतिसुकै दुख गर्दा पनि कमाउन सकिएन । न हामीले एकछाक निर्धक्कले मिठो खान पायौ न एक सरो राम्रो कपडा लगाउन पायौ । जति दुःख गरे पनि जति पसिना बगाए पनि नसक्ने भएपछि मेरो मन भित्रभित्रै गलेको थियो । र त जे पर्ला पर्ला भनेर आप्mनो प्राण भन्दा पनि प्यारी तिमीलाई छोडेर म यता आएँ ।
चुल्बुले छोरी र मुटुको टुक्रा तिमीलाई एक्लै छाडेर आउन मन त कहाँ थियो र कान्छु । म यता आउन लाग्दा तिमी जति रोयौ नि मेरो मन पनि त्यतिकै रोएको थियो । मनभित्रैबाट भक्कानो फुटेर विस्फोट हुन लागेको थियो तर मैले आँसु झार्दा तिमीलाई झन गाह्रो होला भनेर सकिनसकी आँसु थामेर तिमीलाई फकाएँ । एयरपोर्टमा झरेको तिम्रो आँसु देख्दा मनभित्रैदेखि रसाएको थियो । जे पर्ला पर्ला भनेर पासपोर्ट च्याटेर घर फर्किन मन लागेको थियो ।
हुन त बिदेश आउनेहरु आप्mनो दुःख लुकाउछन् । तर मेरो बिन्ती छ । मैले बिसाएको दुःखलाई तिमीले भारी नठान्नु । दुःख बिसाउदा मन हल्का हुन्छ त्यसैले बरु मेरो मन हल्का बनाउन साथ देउ डार्लिङ । हुन त तिमीलाई यहाँको दुःख सुनाउन हुदैनथ्यो तर मेरो आप्mनो भन्ने अरु को नै छ र । सुख भने पनि, दुःख भने पनि साट्ने तिमीसँग नै त हो । तिम्रो लागि म जस्तोसुकै दुःख भोग्न पनि तयार छु । जब मलाई दुःख आइपर्छ नि तब तिमी सम्झिन्छु किनकी तिमीलाई सम्झिने बित्तिकै दुःखले गह्रौ बनेको मनमा शितलता छाउँछ ।
परदेशमा पैसा कमाउन कहाँ त्यति सजिलो हुँदो रहेछ र । साहु र सुपरभाइजरको हप्कीखप्की, साथीहरुको पेलान भनीसाध्य छैन । खानेकुरा र बस्ने ठाउँको त कुरै नगरौ । न भने जस्तो खान पाउनु न राम्रो ठाउँमा बस्नु पाउनु । न बिरामी भनेर घरमा बस्न पाउनु न त काम गर्न अल्छी गर्न पाउनु । यहाँ साहुको जति हप्कीखप्की त मैले आप्mनै बाउको पनि खाएको छैन । तर के गर्नु प्रिय, पापी पेट पाल्नकै लागि मान्छेले अनेकन हण्डर ठक्कर खानु पर्दाे रहेछ । अब त बानी लाग्न थालिसक्यो । काम नगरी बस्न नसक्ने बानी परिसक्यो ।
त्यहाँ भाडा माझ्न, कपडा धुन एकदमै झन्झट लाग्थ्यो अब त मलाई यस्तो केही गाह्रो लाग्दैन । यहाँको पीडा भनिसाध्य छैन प्रिय । मैले मात्रै होईन सबैको पीडा उस्तै हो । धेरै साथीहरुले आप्mनो पीडा घरमा सुनाउदैनन् । आफू बिरामी भएर बस्दा पनि घरमा हाँसीमजाक रमाइलोको नाटक गर्छन । किनकी हामी परदेश आएपछि आप्mनो पीडा सुनाएर परिवारलाई पीडा दिन मनले मान्दैन । मैले पनि तिमीलाई यी कुराहरु सुनाउन चाहन्नथे तर तिमीलाई थाहै छ म तिमीलाई ढाट्न सक्दिन । तर मैले जति दुःख पीडा सुनाए पनि तिमीले अलिकति पनि मन नदुखाउनु किनकी यो सबै हाम्रो बाध्यता र हाम्रै फाइदाका लागि हो । तिमीले दुःख मान्दैमा मेरो दुःख घट्ने पनि त होईन क्यारे । बरु तिमी दुःखी बन्दा मलाई दुःखमाथि दुःख थपिन्छ । मेरो दुःखमा तिमीले कुनै दुःख मनाउ गर्नु पर्दैन केवल मेरो दुःख बुझिदिए पुग्छ प्रिय ।
म यता आएपछि तिमीलाई कति गाह्रो भयो होला । नानीले कति दुःख दियो होला । घर परिवार, आफन्त, छर छिमेकी, समाजसँगको ब्यवहार कसरी धान्यौ होला । नानी बिरामी हुँदा तिमी कति आँतियौ होला । अझ तिमी बिरामी हुँदा कति गाह्रो भयो होला । सहरमा एक्लै बसेकी छौ, बिरामी हुँदा कसरी पकाएर खायौ होला । नानी कसरी सम्हाल्यौ होला । म सधै भगवानसँग प्राथना गर्छु, मेरी प्राणप्यारीलाई केही नहोस् । बरु तिमीलाई जे हुनुपर्ने हो त्यो सबै मलाई होस् । म बिरामी भएँ भने त जसरी पनि सहँुला तर तिमी बिरामी भयो भने कसरी सम्हालिएर बस्ला भन्ने एकदम डर लागिरहन्छ ।
बिरानो त्यो सहरमा एक्लै बसेकी महिलाको कुरा काट्नेहरु मात्रै हुन्छन् । बिरामी पर्दा पनि अनेक शंका गर्छन् त्यसैले त तिमीलाई बरु गाउँमै गएर बस्नु भनेको तर तिमीले मानिनौ । हुन पनि ठिकै हो अब हामीले नानीको भविष्य पनि त हेर्नुप¥यो । बरु तिम्रो सबै रोग मलाई सरोस् तर तिमीलाई केही नहोस् ।
मलाई केवल तिम्रो माया र बिश्वासको खाँचो छ नक्कली । तिम्रो न्यानो माया पायो भने यस्तो हजार दुःख गर्न पनि मलाई गाह्रो पर्दैन । तिम्रो मायाले नै मलाई दुःख गर्न ऊर्जा मिल्छ । पीडा र कष्ठ सामना गर्न आत्मबल बढाउछ तिम्रो मायाले ।
म यहाँ आएदेखि तिम्रै बोली, तिम्रै हातका स्पर्शहरु, तिम्रै मायाका खानकीहरु, तिम्रै मायालु साथहरुको याद आईरहेछ । हरेक रात तिम्रै कल्पनामा वित्छ । हरेक दिनजसो तिम्रै सपना देख्छु । तिम्रो हातले पकाएको खानाको स्वाद, तिमीले मायाले साँची राखेको खाजा, तिमीले ओछ्यानमै ल्याईदिने चिया । वाउ ! सम्झिदा मात्रै पनि आनन्द लाग्छ । क्या मज्जा लाग्छ ।
तिम्रोे हाँसो, तिम्रो नखरा, तिम्रो रुवाई, तिम्रो नजर, तिम्रो बोली, तिम्रो आँखा झिम्काई, निधार खुम्चाई, तिम्रो ठुस्काई, तिम्रो जिस्काई, तिम्रो कर्के हेराईहरु र तिमीसँग बसेका एक एक पलहरुको झलझली याद आइरहेछ काली । तिम्रो न्यानो अंगालो र स्पर्शको कुरा सम्झिदा मात्रै पनि म पागल हुन्छु । यस्ती प्राणप्यारीलाई चटक्कै छोडेर सात समुद्र पारी आउनुपर्ने आप्mनै पुर्पुरोलाई धिकार्छु । अनि फेरि तिम्रै माया सम्झेर सम्हालिन्छु ।
म बिरामी पर्दा तिमीले दिएको मायाको त म ऋणी नै छु । मेरो लागि मरिमेत्ने तिमीलाई छोडेर बस्नुपर्दाको पीडा म कसरी बयान गरुँ र कान्छु । त्यसैले त म तिमीलाई बारम्बार फोन, म्यासेज गरिरहन्छु नि । तर मैले फोन गर्दा तिमी झर्किएपछि मेरो मनमा चिसो पस्छ । त्यसरी मेरो मनमा पसेको चिसोले मलाई सर्दी लाग्छ र त्यो सर्दी निको पार्न तिमीले मात्रै सक्छौ । हुन त समय सधै एकनासले चल्दैन । तिमीलाई पनि विविध कारणले मुडअफ होला । तर समस्या पर्दा बरु निर्धक्क समस्या सुनाउनु । मेरो फोन र म्यासेजलाई वेवास्ता नगर्नु ल काली ।
अरुका श्रीमान श्रीमती सँगसँगै हिडेको देख्दा पनि मन सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ । दुःखपछि सुख आउछ भन्छन् त्यसैले म अहिले दुःख मै रमाउन चाहन्छु । म एक्लैले दुःख गरेर सबै परिवारलाई सुख हुन्छ भने म यसैमा खुशी छु । किनभने तिमीहरुलाई खुशी दिन सक्नु भनेकै मेरो सफलता हो । मेरो खुशी हो । तिमीहरुको मुहारमा उज्यालो देख्न पाए मात्रै पनि म खुशीले पागल हुन्छु ।
आखिर नेपालमै बसेको भए पनि त दुःख गर्नै पथ्र्याे । म यता आएर झन तिम्रो माया बढेको छ डार्लिङ । एकपटक सम्झिनु त । सधै सँगै हुँदा हाम्रो कति धेरै झगडा हुन्थ्यो । सानो सानो निहुमा पनि तिमी झण्डै मलाई छोडेर जान लागेकी थियौ एकपटक । तर म यता आएदेखि तिमीले पनि निहु खोजेकी छैनौ र मैले पनि । तिम्रो मनमा पनि मप्रति पहिलेभन्दा अलि बढी नै माया पलाएको जस्तो लाग्दैछ, नढाँटी भन्नु त काली । खासमा मैले यहाँ आएपछि मात्रै मायाको खास अर्थ बुँझे । सँगै हुँदा मान्छेको महत्व नबुझिने रहेछ । टाढिएपछि मात्रै मैले तिम्रो अभाव महशुस गर्न पाएँ । हुन त भन्न नहुने हो तर आज म भन्दैछु । हरेक पटक बिरामी पर्दा मेरो आँखाबाट तिम्रो यादको आँसु झर्छ ।
हुन त तिमी बुझकी छौ, मैले सम्झाई राख्नु पर्दैन । तिम्रा पनि जवानीका अनेकन रहर होलान् तर मैले ती रहरहरु तिमीसँगै बसेर पूरा गरि दिन सकिन । यसमा चित्त दुखाएर मनलाई नभुलाउ प्रिय । मैले यहाँ जे जति गरिरहेको छु सबै केवल तिम्रैलागि त गरिरहेको छु ।
म केही कुरा भन्दैछु अन्यथा नलिनु है । मनको कुरा साट्ने तिमीबाहेक अरु को नै छ र । अस्ती मात्रै हामी सँगै काम गर्ने एक जना साथीको बेहाल भयो । यहाँ हुँदा खुबै मायाको नाटक गर्ने उनको श्रीमती, साथी नेपाल पुगेकै दिन अर्कैसँग भागिछे । बिचरा त्यो साथीले परिवारका लागि भनेर कति दुःख गर्थे, आफूले खाइनखाई सबै तलब श्रीमतीलाई पठाई दिन्थे । बिचराको अहिले बेहाल भएको रहेछ । उनीहरु फोनमा मस्केको देख्दा त्यसो होला जस्तो लागेको थिएन । मान्छेहरुको स्वभाव पनि बुझी नसक्नुको हुँदो रहेछ प्रिय ।
केही त्यस्ता महिलाहरुले गर्दा श्रीमान बिदेशिएका महिलालाई समाजले हेर्ने नजर नै नकारात्मक बन्न थालिसकेको छ । कोही श्रीमानको पैसा मोजमस्ती गरेर उडाउने, कोही श्रीमान नभएको मौका छोप्दै रोमान्स गर्ने । यस्ता आईमाईहरुका कारण तिमीलाई पनि त्यो छरछिमेकले कुनजर लगाएका होलान् । उनीहरुबाट जोगिनु प्रिय । आफू राम्रो हुञ्जेल कसैले पनि कुरा काट्न सक्दैनन् । आफूले गलत गरेपछि पो आफैलाई मुख देखाउन लाज लाग्छ त ।
बिदेशमा पुगेका नेपाली केटाहरु नेपाली र बिदेशी केटीसँग लागेर बिग्रिए भन्ने सुनेर तिम्रो मनमा पनि मप्रति केही शंका लागेकै होला । तर म यहाँ त्यसरी हिड्ने अवस्थामै छैन । काम, काम अनि काम त्यसपछि बाँकी भएको थोरै समयमा खाम र निदाम । मेरो हालत यस्तै छ ।
सम्पत्ती नभएपछि श्रीमतीले पनि साथ छोड्छ भन्छन तर तिमीले मेरो हरेक दुःखमा साथ दिँदै आयौ त्यसैले तिमीलाई मेरो पूरापुर बिश्वास छ लभ्ली बुढी । तिमी त्यस्तो गलत काममा लाग्ने छैनौ किनकी म धेरैपटक गलत बाटोमा लाग्दा तिमीले नै सम्झाएर म सुध्रिएको हुँ । चाहना त मेरो पनि छ तिम्रो पनि होलान् तर समयले ति चाहनाहरु पक्कै पूरा गरि दिनेछ ।
अनि म सुटुक्क भन्दैछु । तिमीले मुखले जतिसुकै नाइ नास्ती भने पनि जवानीको प्यास त पक्कै लागेकै होला नक्कली । मलाई बिश्वास छ, तिमीले त्यसको दुरुपयोग गर्नेछैनौ । प्रतिक्षाको फल मिठो हुन्छ भनेर डेटिङ जाँदा तिमीले नै मलाई सम्झाएका थियौ क्यारे । जतिधेरै भोक लाग्यो त्यति नै खानेकुरा स्वादिलो लाग्छ नि होईन र ? थोरै भोक लाग्दा खानेकुराको स्वाद पनि ठिकै मात्र लाग्छ तर धेरै भोग लाग्दा त्यही खानेकुराको स्वाद धेरै नै मिठो लाग्छ । आखिर मिठो त खानेकुरा होईन भोक हो नि । कि कसो बुढीया ।
अनि प्रिय तिमीलाई परेका दुःख, पीडा, समस्या र अप्mठेराहरु खुलस्त भन्ने गर्नु । जब समस्याहरु लुकाईन्छ नि त्यसले शंका बढाउछ र समस्यामाथि समस्याको चाङ थुप्रिन्छ । जब श्रीमान श्रीमतीबीच समस्याहरुमा सल्लाह हुन्छ अनि मात्रै समाधान निस्किन्छ ।
प्रिय हर रात दिन तिम्रो याद र तिम्रै मायाले पोलिरहन्छ । तिमीप्रतिको मायाको बर्णन गर्न थालियो भने बर्षाै बितेपनि सकिदैन । त्यसैले नानीको राम्ररी ख्याल गर्नु । बिरामी हुँदा घरमा भन्न अप्ठ्यारो लागे मलाई नै भन्नु, म घरमा भनिदिउँला । त्यहाँ हुँदा मलाई खर्च गर्न सिकाउथ्यौ अब मैले पक्कै सिकाइ रहन पर्दैन होला । खर्च सकिँदा मलाई भन्न अप्ठ्यारो नमान्नु । छरछिमेकीसँग असल सम्बन्ध बनाउनु ता कि आवश्यक पर्दा सहयोग मिल्छ । सापती लिन, दिन र फिर्ता गर्न नबिर्सनु । सबैभन्दा ठूलो कुरा आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु र मेरो बारे कुनै चिन्ता नलिनु ।
च्याट गर्दा जहिले um um मात्रै होईन अबदेखि त्यसमा म लाई ( Ma ) थपेर Umma पनि भन्ने गर्नु काली । किनकी मलाई यो मरुभूमिमा पानीको भन्दा पनि तिम्रो मायाको प्यासले प्याकप्याकी लाग्छ । तिम्रो एक Umma ले पनि मनभरी अमृतमय रस सररर फैलिन्छ र म आनन्दित हुन्छु ।
priyasi lai aprdeshiko patra, ramji balami, परदेशी श्रीमानका मनका कुरा
Prevप्रहरीमा महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षण दिने तयारीः मुख्यमन्त्री
बजेटका बारेमा जथाभावी नबोल्न ओलीको निर्देशनNext
कांग्रेसको महत्वपूर्ण १५ धारणा
पहिचान हराएको ठाउँ टिष्टुङ
फाँसी दिने देशहरुमा कस्तो छ बलात्कारको अवस्था ?